एमसीसी प्रकरणमा महराले मुख खोले
Friday, October 22, 2021 |शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८
ई-पेपर इकोनोमिक पोस्ट
श्यामसुन्दर सोमबार, माघ ६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को कम्याक्ट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषयले मुलुकमा अहिले पनि आगो बलिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रै यो विषयमा मतऐक्य छैन । सत्ताबाहिर पनि उत्तिकै विभाजित छन्, मान्छेहरु । यहीबेला ‘एमसीसी रोक्न खोजेकै कारण फसाईए’को भनिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले मुख खोलेका छन् । पदमै रहँदा संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप खेपिरहेका महरा अहिले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार (चारखाल अड्डा)कारागारमा छन् ।
डिल्लीबजार कारागारमा जनतापाटी संवाददातासँग कुरा गर्दै महराले भने , ‘एमसीसीको कार्यक्रम भित्र्याउने प्रक्रिया सबै मैले नै पूरा गरेको हुँ । तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर चाँहि गरेको हैन है ।’
प्रचण्ड दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा महरा अर्थमन्त्री थिए, (२०७३) मा । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए र कार्कीले एमसीसी भित्र्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उनले २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्, त्यो बेला परराष्ट्रमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर महरा ।
तपाईले भने अनुसार आफैले भित्र्याउन पहल गरेको कार्यक्रम आफैँ रोक्नु पर्ने अवस्था चाँहि किन आयो ? प्रश्न पूरा नहुँदै उनले जवाफ दिए, ‘हेर्नुस् एमसीसीभित्र विकासको कुरा मात्रै छैन । अन्य कुराहरु पनि छन् । त्यो रोक्नु पर्छ । त्यो रोकिएन भने मुलुकभर भोलि अमेरिकी सेनाको परेडस्थल हुनेछ । पहिले हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दा ईण्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस)को कुरा थिएन । तर, अहिले खतरनाक ढंगले आयो ।’
होइन, अमेरिकी दूतावासले यो आइपीएसको अंग होइन भनेर औपचारिक रुपमा फेरि पनि भन्यो त ! प्रतिप्रश्न नसकिँदै फेरि महराले जवाफ दिए, ‘कहाँ भनिएको छ र ? सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छैन मात्रै भनेको छ । हामी भित्र बसेपनि यत्ति कुरा त थाहा हुन्छ नि हौ, ....(महरा फिस्स हाँसे) ।’
एमसीसी ईण्डो प्यासेफिककै अंग मात्र नभई नेपालमा ईलेक्ट्रिक डिभाइस, क्षेप्यास्त्र प्रणाली नै जडान गर्ने गरेर चीनलाई निशाना बनाउने कुरा आउन थालेपछि रोक्नु पर्ने अवस्था आयो । र, मैले रोकेकै हुँ । तर, प्रधानमन्त्रीले नै आइपीएससँग जोडिएको छैन, यो सहयोग स्वीकार्नुपर्छ भनिरहेको कुरामा भने उनले सीधा जवाफ भने दिएनन् । उनले भने, ‘मैले के भन्नु पर्छ र रावल–गुरुङ्जी (भीम रावल र देव गुरुङ)हरुले भनिरहनु भएको छ त ! हिजो युद्धका लागि प्रयोग भएको पाल्पाको ‘नुवाकोटगढी’ तिर क्रसबोर्डर लाइनु लैजानुलाई कसरी हेर्ने ? तपाईहरु(मिडिया)ले सकारात्मक भूमिका खेल्नुस्, मुलुक अर्कैतिर जाँदै छ !’
महराले एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरु विभाजित भएकोबारे चिन्ता गर्दै मुलुक बचाउन अहिलेको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई रोकेर निकै सुझबुझको बाटो अपनाउनु पर्ने बताए ।
एमसीसी बाहेक महरासँग अर्को प्रसंगमा पनि कुरा भयो । आफुलाई अहिले अस्पताल जानु नपरेको र ज्यानलाई जाती नै रहेको सुनाए । उनले भने, ‘झट्ट हेर्दा मान्छे जेल भन्नेवित्तिकै यस्तो भो उस्तो भो भन्ने सम्झिन्छन् । तर, हाम्रो भित्रि संसार आनन्दमय नै छ ।’
पहिला पनि प्राय सुस्तरी नै बोल्ने गरेका महरा अहिले अझ कम बोल्न थालेका छन् । भेट गर्न आउने मान्छेहरुसँग उनी धेरै बेर कुरा गर्दैनन् ।जसरी टीकापुर घटनाको मुख्य आरोपी भन्दै काराबास भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी घण्टौँ वातमार्न सक्छन्, महरा त्यसरी लामो कुरा गर्दैनन् ।
उनलाई एउटा कुरामा भने साह्रै पछुतो लागिरहेको रहेछ, अहिले । महराले आफ्नो मनका कुरा सुनाउने अर्का पात्र हुन्, ‘वामदेव गौतम’को छोरा नै भनेर चिनिएका नेकपा नेता, डिबी कार्की । कार्कीसँग वातमार्दा महरा ‘१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष सम्झिन्छन् । संविधान सभा हुँदै सत्तामा बसी खाए खेलेको र सभामुख (एउटा न्यूट्रल पद)मा रहँदा खप्की खानु परेको कुराहरुलाई उनी हिजो परिवर्तनका नाउँमा आफुहरुले कतै ‘इन्टिच्यूसन’ अर्थात् संस्था त मारेनौँ भन्नेमा पछुतो मान्छन् ।’
गणतन्त्रपछि आफूहरु पटक–पटक सत्तामा गएको, तर न्यायालय, संवैधानिक निकाय, संसदीय मर्यादा आदीमा चुकेको हो कि भन्ने चिसो पसेको छ, उनको मनमा अहिले । उनी कारागारभित्र आसपासका मान्छेहरुसँग यी कुरा गर्छन् । र, आफै‌ँ काराबास पुगेपछि उनीभित्र थुप्रै चेतहरु खुल्न थालेका छन् (..एए् यसरी फसाउँदा रहेछन्) । त्यति मात्रै होइन हिजो गरिएका भुलचुकहरु समेत आँखा अघिल्तिर आउन थालेका छन्, महराका । तर, आफ्नो मुद्दाबारे भने महरा मौनप्रायः रहन्छन् ।
(महरासँगको कुराकानीमा आधारित)
याे पनि पढाैँ
एमसीसी प्रकरण : ‘प्रचण्डले कुरा चपाए, अरुले लोक हँसाए’
एमसीसीमा ईण्डो प्यासेफिकको भूत देख्नेहरु ‘ओभर सिन्सेटिभ’
अविश्वासको प्रस्ताव देखि आफ्नै कार्यकर्ताको हत्यासम्म शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
टिपर दुर्घटनाको अन्तर्य बुझिनसक्नु बुधबार, चैत ५, २०७६
‘घाटबाट मुर्दाको प्रश्न’–खै हामीलाई जलाउने दाउरा ? आइतबार, फागुन २५, २०७६
आर्थिक संकटमा क्रिकेट रंगशाला, क-कसले दिएनन् कबोल गरेको रकम ?
दलको लगाम ‘थ्रेसहोल्ड’
किन बढ्यो महासचिव विप्लवको सक्रियता ?
एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिका हदैसम्म लचिलो बन्दै
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर मूल्य ‘स्पलिट’ गरिदैं
कोरोना बीमामा अर्थमन्त्रीको ‘एक्सन’
ठेगाना तिनकुने, काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5199576 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5199575 [email protected]
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2021 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP